Wax Ka Ogow Afarta Kooxood Ee Isagu Soo Haray Semi-finalka Europa League | Laacib.net
April 19, 2019 Balaleti 0
Arsenal waxa ay xilli ciyaareedka Europa League ka soo bilowday wareega group-yada waxa ay badiyeen sagaal kulan halka laga badiyay labo kulan, waxaana ay barbaro galeen kaliya hal kulan.
Wareegii 32da waxa ay 3-1 labadii lug ku soo qaarjiyeen kooxda BATE Borisov, 4-3 ayay ku soo garaaceen kooxda Faransiiska ee Rennes wareegii 16ka, halka ay wareega 8da 3-0 ku dubteen kooxda Talyaaniga ee Napoli.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waxa ay sidoo kale gaareen wareega afar dhamaadka. Arsenal waligood kuma guuleysanin Europa League ama xitaa markii UEFA Cup la oran jiray, markoodii ay ugu fiicnaayeen waxa ay gaareen final sannadkii 2000.
Chelsea si la mid ah Arsenal waxa ay tartankaan ka soo bilaabeen wareega group-yada, lagamana badinin xilli ciyaareedka tartanka Europa League iyagoo badiyay 11 kulan waxaana ay barbaro galeen kaliya hal kulan.
Wareega 32da waxa ay 5-1 labadii lug ku garaaceen kooxda reer Sweden ee Malmo, waxa ay 8-0 ku xasuuqeen kooxda Dynamo Kyiv wareegii 16ka, halka wareegii 8da 5-3 ku dardareen kooxda Slavia Praha.
Xilli ciyaareedkii hore Chelsea waxa ay ku jirtay tartanka Champions League oo ay ka gaartay wareega 16ka.
Chelsea waxa ay koobka Europa League ku guuleysatay sannadkii 2013.
Valencia (La Liga)
Valencia waxa ay tartanka Europa League ka soo gashay wareega 32da madaama ay ku soo hareen wareegii group-yada Champions League ee xilli ciyaareedkan. Lix kulan oo ay ilaa haatan ciyaareen Europa League lagama badinin waxaana ay badiyeen shan kulan oo ka mid ah.
Wareegii 32da waxa ay 3-0 labadii lug ku dardareen Celtic, wareegii 16ka waxa ay 3-2 kaga badiyeen kooxda Krasnodar, halka wareegii 8da ay 5-1 ku qaarjiyeen kooxda kale ee reer Spain Villarreal.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Valencia kama qeyb gelin tartamada Yurub, waxaana ay koobka Europa League ku guuleysteen sannadkii 2004.
Kooxda Jarmalka ee Frankfurt waxa ay tartanka Europa League ka bilaabeen wareega group-yada. 12kii kulan ee ay ilaa iyo haatan ciyaareen waxa ay badiyeen 9 kulan oo ka mid ah, waxa ay barbaro galeen labo kulan waxaana laga badiyay hal kulan.
Wareegii 32da waxa ay 6-3 ku dardareen labada lug kooxda Shakhtar Donetsk, 1-0 ayay kaga badiyeen Inter Milan wareegii 16ka, waxaana ay sharciga goolasha martida kaga soo baxeen xalay kooxda Benfica oo wadar ahaan labada lug ay 4-4 isla gaareen.
Markii ugu danbeysay ee Frankfurt ay ka soo muuqata tartamada Yurub axa ay aheyd xilli ciyaareedkii 2013-14. Waxaana ay koobkaan Europa League ee loo aqoon jiray UEFA Cup ku guuleysteen 1980.
Isku Aadka Semi-finalka Europa League: